Buuq ka dhashay fadhigii golaha wakiilada Somaliland ee maanta. – Radio Daljir
Buuq ka dhashay fadhigii golaha wakiilada Somaliland ee maanta.
Hargeysa, Sept 23 – Fadhigii maanta ee Golaha Wakiilada ayaa la gudo-galay Doodda Mooshinka xil-ka-xayuubinta Madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa, waxaana ka dhashay buuq iyo sawaxan keenay degannaansho-la?aan.
Fadhigan maanta oo uu guddoominayay Guddoomiyaha Golahaas Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro), ayaa Mudanayaashu gudo-galeen Doodda Mooshin ay wateen mudanayaasha Mucaaradku oo ah xil-ka-xayuubinta Madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa oo ka mid ah qodobada Ajandaha kalfadhigan aan caadiga ahayn oo shalay Goluhu duuduub ku ansixiyay.
Inkasta oo Mudanayaasha Muxaafadka oo fadhigii ansixinta ajandaha ee shalay dibedda ka joogay ay maanta codsadeen in ay Golaha ka hor akhriyaan Mooshin ay iyana dhinacooda ka wataan oo ah wax-ka-bedelka Xeer-hoosaadka Golaha oo qasdigoodu yahay bedelaadda Shirguddoonka, haddana waxa lagu wargeliyay in shalay markii ay fadhiga ka maqnaayeen uu halkaa ka akhriyay Xil.
Xariir Siciid Bullaale oo ka mid ahaa Mudanayaasha saxeexay, isla markaana uu sheegay in ay ka noqdeen. Sidaa darteed, aanay taasi suurtogal ka dhigayn in maanta la dhegaysto. Hase ahaatee, waxa taa ka biyo-diiday Mudanayaasha Muxaafadka oo ku adkaystay dalabkoodii. Taasina waxay keentay in muran dhasho, markii dambe isu-bedelay rabshad iyo gacan-ka-hadal.
Ugu dambayntii qaar ka mid ah Mudanayaasha ayaa dooddooda dhiibtay, waxaana loo ballamay in beri oo Khamiis ah halkaa laga sii amba-qaado Dooddan.